Showing posts with the label NRB
पोखरा एक्सप्रेस [कथा]
Aakar November 27, 2012
"पोखरा बजार टुरिस्ट हजार" त जम्मैले सुनेकै होलान्। हामी त्यहिँ हुर्केम् बढेम्, नानाथरि उपद्रो र उट्पट्याङ गरेम्, व्यक्तित्व त त्यस्तै हो तर ‘साइज’ले चैं ठुला भएम्, अब बिस्तारै बुढाहरुमा पनि गनिन्छौँ होला। 'होला' के भन्नु, लक्षण आजकलै देखा परिसकेकोछ, कसैले साइड हान्दैनन्, आफुले हानेका साइडको रेस्पोन्स पाइन्नन्। कताकता मन खिन्न हुन्छ। जे होस् टुरिस्ट बढेका बढ्यै छन् पोखरामा। ‘ट्रेकिङ’, ‘साइट सिईङ’, ‘बोटिङ’ले त प्रख्यात नै थियो पोखरा, ‘एभिया क्लब’का स्याना जहाज अनि ठुल्ठुला रंगीचंगी बेलुनमा मान्छेहरु उड्न आऊँथे, अहिले झन् ‘प्याराग्लाईडिङ’ र ‘जिप फ्लायर’ले गर्दा आन्तरिक र बिदेशी पर्यटक ह्वात्तै बढेका छन्। अझै केबुल कार र अरु धेरैकुरा खुल्दैछन् भन्ने सुन्नमा आइरहेको छ। हामी स्याना हूँदा यतिका धेरै पर्यटक हूँदैनथे, जे होस् फाट्टफुट्ट चाहिँ देखिन्थे। टुरिस्टलाइ हामी कुइरे भन्थेम्, बसमा देखिए भने 'टाटा', साक्षात देखिए भने 'नमस्ते' गर्नु भनेर हामीलाई सिकाइएको थियो। अझ दुईतले बसमा कुइरे आएको देखेम् भने टाटा गर्दै च्याँठ्ठिदै उफ्रिन्थेम्। अचेल त्यो दुइतले बस कत
प्यासेन्जर कोइ भुस परे, धादिङे जती जम्मैले पालैपालो वाके। तीनलाई हेर्दाखेरी त ड्राइभर मस्तसँग अगाडि सिटमा बसेकोछ, स्टेरिङ् घुमाकोछ, गीत सुन्दै मोटर हुइँकाकोछ भन्ने लाग्दो हो। यहाँ मान्छेलाई कति पीर छ, तीनलाई के थाहा? हुन त म पनि केटकेटी हुँदा त्यस्तै ठान्थेँ। मोटर देखेपछी स्कुल छोडेर मोटरमा झुन्डिन जान्थें। बा-आमाले गाली गर्दा ती मेरा र मोटरका त दुश्मनै हुन की जस्तो लाग्थ्यो। हेर्दाहेर्दै स्कुल छोडियो, घर छोडियो, गाउँ छोडियो... सबै कुरा छोडियो तर केही पाइएन। पाइयो त एउटा खँलासीको जागिर। जे कुरा पनि रहर हुँदा मात्रै रमाइलो लाग्ने रहेछ, त्यही रहर काम बन्यो भने मन मर्दो रहेछ। तर के गर्नु? पढाई छैन, ईलम छैन, सिप छैन? रमाइलोको लागि बसमा झुन्डिदा झुन्डिदै आखिरमा ड्राइभर सम्म बनियो। अब ईलमले यो भन्दा अरु चाँहीं केही बनिएला जस्तो छैन। अब बन्न मन लागेको भनेको बाउ हो, तर खोइ दुइटा ज्यान पाल्न त धौ धौ भएको बेलामा कसरी धान्ने हाउ? बुढीले पनि खुब रहर गर्छे, तर भन्न सक्दिन बिचरी, मेरो ब्यथा त्यस्ले जस्तरि कल्ले बुझ्छ र? त्यसैले अब सोच्नै पर्छ, रिनधन नै गरेर भए पनि बिदेश जानु पर्‍यो। एउटा सन्तानक
लौ अचम्म...!! फोम पो लोड गर्दै रहेछन छतमा। राम्रै लगेज पाईएछ आज। 'सरले बोलाउनु भएको छ', खलाँसीले भन्यो। को-को न सर होला भनेको अघि उही क्यु लाइदिन्न भन्ने लण्ठु रहेछ। 'बर्खा मास लगेज पायौ, राम्रो भो। ल यो बील र पैसा राख' 'सर यत्रो लगेज छ, १५०० त साह्रै थोरै भयो नि' 'तेरिमासाले फोम हो यो, हल्का छ, हेर्दा मात्रै धेरै देखिएको हो, लिने भए लि नत्र म समान झारिदिन्छु' 'सर ट्राफिकले ३ ठाऊंमा मात्रै समाए भने यति पैसा सबै तिनैलाई बुझाऊँदैमा ठीक्क हुन्छ, साहुलाई के दिनु मैले? यतिमा त म लैजान्न' 'ओइ, त्यो समान झारिदे, पछाडिको गाडीमा हाल' 'सर हाम्रो लगेज बुक भाईसकेको छ, हाल्न मिल्दैन' पछाडिको ड्राइभर बाठो भैहाल्यो। 'सर समान झारिदिनुस्, मेरो समय हुन लाग्यो।' म पनि हल्का बाठो भए झैं गरें। 'ल ल भन् कतिमा लैजान्छस?' 'तँ मु**को समान त जती नै दिए नि लान्न' मनले यस्तो भन भन्यो तर भनिन, 'सर अब यत्रो समान, कति दिने आँफै बिचार गर्नुस्।' 'हेर तिमीहरुलाई अर्को पटक लगेज चाहिन्छ की चाहिंदैन? खुरुक्क भन